Iwu nzuzo 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Ewelitela iwu a na 30/04/202020
Izipu data nkeonwe na webụsaịtị a bụ iwu ịkpọtụrụ, kwuo okwu, denye aha na emulator.online blog, were ọrụ egosipụta na weebụsaịtị a ma zụta akwụkwọ ndị ahụ na usoro dijitalụ.
emulator.online ga-anakọta Data nke Ndị Ọrụ, site na ntanetị, na ntanetị. Ozi nkeonwe anakọtara, dabere na ọnọdụ nke ọ bụla, nwere ike ịdị, n'etiti ndị ọzọ: aha, aha nna, email na njikọ nnweta. N'otu aka ahụ, n'ihe gbasara ọrụ nkwekọrịta, ịzụta akwụkwọ na mgbasa ozi, m ga-ajụ Onye ọrụ maka ụfọdụ ichekwa ego na bank ma ọ bụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ.
Sistemụ na-ejide ozi nkeonwe nke emulator.online na-eji :
Mgbe ị na-eji ọrụ nke MailChimp ikpo okwu maka ịme mkpọsa ahịa email, njikwa ndenye aha na izipu akwụkwọ akụkọ, ị kwesịrị ịma na MailChimp O nwere ndi sava ya na-akwado ya na US ma ya mere data nke onwe gị A ga-ebufe ha na mba ọzọ gaa na mba echere na enweghị nchebe mgbe mgbasa nke Ọdụ Nchekwa mgbasa. Site na ịdenye aha, ị nabatara ma kwenye na nchekwa data gị site na MailChimp platform, nke dị na United States, iji jikwaa izipu nke akwụkwọ akụkọ kwekọrọ. A na-emegharị MailChimp ka ọ bụrụ ụkpụrụ nke ọkọlọtọ EU na nchekwa data.
Cookies: Mgbe onye ọrụ debara aha ma ọ bụ ịchọgharị weebụsaịtị a, echekwara 'kuki' Onye ọrụ ahụ nwere ike ịlele nke ahụ iwu kuki ịmụba ozi banyere iji kuki na otu esi ewepụ ha.
Ndị ọrụ nwere ike wepu aha n’oge obula nke oru nke emulador.online otu akwukwo.
Emulator.online na-enyocha mmasị nke ndị ọrụ ya, njirimara omume igwe mmadụ ha, ụzọ okporo ụzọ ha, na ozi ndị ọzọ ọnụ iji ghọta nke ọma ndị na-ege anyị ntị bụ na ihe ha chọrọ. Ndepụta mmasị ndị ọrụ anyị na-enyekwara anyị aka igosi gị mgbasa ozi kachasị mkpa.
Onye ọrụ ahụ na, n'ozuzu, onye ọ bụla sitere n'okike ma ọ bụ nke iwu, nwere ike ịmalite hyperlink ma ọ bụ ngwaọrụ njikọ teknụzụ (dịka ọmụmaatụ, njikọ ma ọ bụ bọtịnụ) site na webụsaịtị ha gaa na emulator.online ("Hyperlink"). Mbido Hyperlink apụtaghị n'ọnọdụ ọbụla ịdị adị n'etiti emulator.online yana onye nwe saịtị ma ọ bụ ibe weebụ nke Hyperlink guzobere, ma ọ bụ nnabata ma ọ bụ nnabata site na emulator.online nke ọdịnaya ya ma ọ bụ ọrụ. N'ọnọdụ ọ bụla, emulator.online nwere ikike igbochi ma ọ bụ gbanyụọ hyperlink ọ bụla na weebụsaịtị n'oge ọ bụla.
Ndị ọrụ nwere ike wepu aha n’oge obula nke ọrụ e nyere site n’aka emulador.online otu Akwụkwọ Akụkọ.
Onye ọrụ na-ekwe nkwa na data nkeonwe nyere site n'ụdị dị iche iche bụ eziokwu, na-agbali ụgwọ ịkọwa mgbanwe ọ bụla na ya. N’otu aka ahụ, Onye ọrụ na-ekwe nkwa na ozi niile enyere enyere dabara na ọnọdụ ha n'ezie, na ọ bụ ihe mm ụta ma zie ezi. Na mgbakwunye, Onye ọrụ ahụ na-agba mbọ idobe data ha oge niile, na-esonye na ndudue ma ọ bụ ụgha nke data enyere yana maka mmebi nke a nwere ike kpatara nke a na Servicios Telemáticos SL dị ka onye nwe web emulator.online.
You nwere ike iduzi nkwukọrịta gị ma jiri ikike nke nnweta, idozi, kagbuo ya na mmegide Site na nzipu ozi leta na C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada) ma ọ bụ site na email: ozi (na) emulador.online yana ihe akaebe dị na iwu, dị ka foto nke DNI ma ọ bụ ihe dakọtara, na-egosi na isiokwu "DATA PROTECTION".
Dabere na LSSICE, Online Servicios Telemáticos SL anaghị arụ ọrụ SPAM, n'ihi ya, ọ naghị eziga ozi ịntanetị nke onye ọrụ na-arịọbeghị ma ọ bụ nye ikike na ya, n'oge ụfọdụ, ọ nwere ike izipu nkwalite nke ya na onyinye a kapịrị ọnụ na ndị ọzọ, naanị na ikpe ebe ịnwere ikike nke ndị nnata.
N'ihi ya, n'ụdị ọ bụla na weebụsaịtị, Onye ọrụ nwere ike ịnye nkwenye nnabata ha iji nata "Akwụkwọ Akụkọ" m, agbanyeghị ozi azụmaahịa chọrọ n'oge. I nwekwara ike kagbuo ndenye aha gị na-akpaghị aka n'otu Akwụkwọ Akụkọ.